4200 Block ee Louisiana • DutchtownSTL • Dutchtown, St. Louis
Ku soo dhowow xarunta 4200 ee Louisiana!
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow dhismaha 4200 ee wadada Louisiana Avenue ee ku taal Dutchtown!
Magacaygu waa Joel Silliman oo waxaan ahay Kabtanka Xilligaan loo yaqaan 'Block Captain' ee 4200 Louisiana.
Gurigeenna ayaa si wanaagsan loogu aasaasay xiriirro hore oo aan la yeelanayno deriskeenna, laakiin 2018, tani waxay heshay dhiirrigelin markii aan yeelannay xafladdeenii ugu horreysay ee qayb ka ah Habeenkii Qaranka. Markii aan ka soo baxay arrintan, waxaan bilownay inaan horumarino qaab isgaarsiineed oo aan ku sii joogi karno xiriir wanaagsan oo midba midka kale ah, taasna waxaa ka billowday taxane iskuxidhyo isku xirxiran, isku dheelitirnaan dheeraad ah iyo diiradda xagga amniga, iyo karti wanaagsan oo aan isugu soo jiidan karno si loo taageero deriskaas baahan.
Waxay ka mid ahayd koritaankan cusub ee aan ku horumariyey aragtideyda sida aan ugu ballaarin karno isla markaana u jaangooyn karno qaaciddada ururkeenna si aan ugu celcelino baloogyo kale si ay saameyn nidaamsan ugu yeeshaan caafimaadka iyo samaqabka bulshooyinka ku xeeran iyadoo aan sii wadno koritaanka gudaha.
Aragtidan dhexdeeda waxaa ku jira qaab dhismeed abaabul oo hoggaamineed oo ku saabsan Badbaadada, Dhacdooyinka, iyo Wacyigelinta, oo ah qaab isgaarsiineed oo ka kooban kuwa awoodda u leh inay elektaroonig ahaan ugu xirmaan ama haddii kale, iyo istiraatiijiyad kobcin istiraatiiji ah 5ta sano ee soo socota, oo ay ku jiraan dhacdooyinka ballaaran ee bulshada. si loo helo xubno ka tirsan bulshadayada ku hareeraysan, iyadoo lala kaashanayo ururada kale ee xaafadaha si loo hubiyo in la waafajiyo howlaha iyo dadaallada aan qabaneyno, iyo qorshe lagu tababaro hoggaamiyeyaasha ka bilaabi doona qaabkan dhismooyinka deriska ah sanadaha soo socda.
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad u guurto xaafaddeena, waan kugu soo dhaweynayaa inaad ila soo xiriirto ama mid ka mid ah iskuduwayaasha kale. Waxaan kaala hadli karnaa waxa aan bulsho ahaan u qabanayno, waxa wanaagsan ee xaafadda, iyo waxa socda ee ku-meel-gaadhka ah.
Haddii aad tahay deris jira, waxaa jira fursado aad kula xiriiri karto ugana qayb geli karto tusaalahan sida aad rabto inaad noqoto, waxaanan kugu dhiirrigelinaynaa inaad gaadho si aan annaguna sidoo kale aan kuugu xirno.
Midkeen innaba kama wada fiicnaado kulligeen innagoo wada jir ah.
Filimka hoos Xannibaadda Wararka. Muuji dhamaan qeybaha. Xannibaadda Wararka. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay September 8th, 2020 .
Jooji Abaabulka - Wadahadal lala yeesho Tasha iyo Staci oo ka socda Podcast-ka 'MizEducation Podcast'
Marka waxaa laygu casuumay inaan kahadlo habka abaabulka baloogyada marwooyinka MizEducation, oo labaduba sidoo kale udub dhexaad u ahaa abaabulka aqalkeena. Wadahadalkani runti wuxuu ka hadlayaa lowska iyo boolal sida loo sameeyo, sidoo kale wuxuu bixiyaa xoogaa jihada guud iyo TON ah kheyraadka.
Haddii aad akhrinaysid ama dhageysatid tan oo aad rabto inaad hesho sida loo abaabulo balooggaaga, fadlan isticmaal bogga Xiriirka si aad iigu soo dirto aniga oo waxaan dejin doonnaa waqti aan uga wada hadalno baahiyahaaga / caqabadahaaga si faahfaahsan. Guri kastaa waxay lahaan doontaa isbaarooyin u gaar ah, laakiin waxaad faa'iido u leedahay inaad ka faa'iideysato casharradeena-barashada oo qayb ka ah howshaada.
Halkan ka eeg fiidiyowga!
Abaabulida Baloogyada Dutchtown
Jimcaha, Ogosto 7th, dadka deegaanka iyo milkiileyaasha ganacsiga ee ka socda xaafadaha 4300 iyo 4400 ee Waddada Virginia Avenue ayaa ku kulmi doona Salonka Starz, 4445 Virginia barxadda dambe. Deriskaani waxay rabaan inay bilaabaan sameynta naadi abaabulan oo isku xiran. Waa lagusoo dhaweynayaa inaad ku soo biirto 5:30 pm ilaa 7:30 pm. La kulan deriska, oo ay weheliyaan dadka deggan xaafadaha kale ee dhow iyo dhowaan la abaabulay, oo lagu daray wakiillo ka socda DT2 • Downtown Dutchtown iyo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown.
Sidee Loo Horjoogsadaa Abaabulka
Koox sii kordheysa oo deris ah oo ku nool Virginia ayaa bilaabay inay ka hadlaan arrimaha ku saabsan guryahooda - qashinka waddooyinka iyo luuqyada, dembiyada, iyo howlaha kale ee buuqa leh ee ka agdhow. Waxa ku bilaabmay qorshe aan rasmi ahayn ee nadiifinta xaafadda ayaa isu beddelay rabitaan ah in loo abuuro isbahaysi abaabulan oo joogto ah deriska si loo xoojiyo loona hagaajiyo geeskooda Dutchtown.
Iyagu maahan dhismihii ugu horreeyay ee laga abaabulo Dutchtown. Badanaa wuxuu ku bilaabmaa jir ahaan. Dhowr deris oo midba midka kale ka kooban balbalooyinkiisa oo ka wada hadlaya khibradaha iyo fikradaha dabacsan qaarkood ayaa isu rogi doona in yar oo deris ah oo nadiifiya luuqda. Markaa waxay qorsheyn doonaan xaflad guri oo qof walba jidka soo dhiga, la shira oo ku milma, badiyaa deriskooda markii ugu horreysay. Waxay is dhaafsadaan lambarrada taleefannada iyo emayllada. Way inbadan wada hadlaan oo is eegaan. Xawaaruhu wuu korayaa.
Maxaa Dhaca Kadib
Tani waa sida ay wax uga bilowdeen dhismaha 4200 ee Louisiana, 3500 ee maxkamadda Kingsland, iyo sida xaqiiqada ah kuwa kale sannadihii la soo dhaafay ee ku baahsanaa Greater Dutchtown. Waxa ku bilaabmay dhawr daris oo si caadi ah ula falgala ayaa noqday shabakad isku xidhan oo deggeneyaasha wada xiriirta, qorsheeya, isla markaana ilaaliya midba midka kale.
Qorshaynta mustaqbalka ee Abaabulka Block
DT2 • Downtown Dutchtown iyo DutchtownSTL.org raadso inaad xoojiso ururradan curdinka ah ee curdanka ah, fududeynta isgaarsiinta, iyo inaad u sameysid shax loogu talagalay baloogyada kale inay raacaan. Iyada oo khibrad u leh deriska horeyba ugu lug lahaa, waxaan rajeyneynaa inaan abuurno qaab toos ah oo ka caawiya xannibaadaha xiisaha leh inay si dhakhso leh isu abaabulaan
Gurigaagu hore ma u leeyahay urur ku habboon biilka? Ma jeclaan lahayd? Nagala soo xiriir iyo ka caawinta qorshaynta mustaqbalka abaabulka baloogga ee Dutchtown.
Waxa kale oo aad nagula kulmi kartaa caawa Starz Salon si aad uhesho cabitaano iyo dood ku saabsan sida dhismahaagu uga qayb qaadan karo. Hubso inaad nabdoon tahay oo la imow maaskaro oo ay weheliyaan fikradahaaga iyo su'aalahaaga!
Sawirka sare by Paul Sableman.
Filimka hoos blocks. Muuji dhamaan qeybaha. blocks, Dembiyada iyo Amniga, DT2, Dutchtown, CID -da Dutchtown, Iyo Fursadaha Tabaruca. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 7th, 2020 .
Raadi Baloogga 4200 ee Louisiana
Inbadan oo ku saabsan 4200 Block ee Louisiana